बाँकेमा किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’ कायमै, प्रशासनको निर्णयविरुद्ध जुट्दै उद्योगी व्यवसायी – Satyapati
बाँकेमा किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’ कायमै, प्रशासनको निर्णयविरुद्ध जुट्दै उद्योगी व्यवसायी
व्यवसायी विष्णु लामिछानेले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा फेसबुकमा फोटो पोष्ट गर्दै भनेका छन्, ‘माफ गर्नुहोला, बाँके जिल्लाका प्रमूख जिल्ला अधिकार ज्यू, मेरा लागि होइन, स्टाफको तलब बैंक ब्याज, सरकारको विभिनन शीर्षकका कर तिर्नका निमित्त तपाईले लागु गरेको शुक्रबार र शनिबार बन्दको दिन कोभिड १९ को स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्दै पसल खोल्ने सोंचमा छु ।'
बाँके । स्थानीय प्रशासनले बाँकेमा गत हप्तादेखि शुक्रबार र शनिबार किस्ताबन्दीमा ‘दुई दिने निषेधाज्ञा’ जारी गरेको छ । त्यो निषेधाज्ञा यो हप्ता पनि कायमै रहने बाँकेका प्रमूख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङ्गले जनाएका छन् ।
उनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘हामी अहिले उच्च जोखिममा छौं । शुक्रबार र शनिबारको निषेधाज्ञा जारी रहनेछ ।’ किस्ताबन्दीमा ‘निषेधाज्ञा’ जारी गरे पनि बाँकेमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम भने जस्ताको तस्तै छ । कोरोना समुदायस्तरमा फैलिइसकेको छ ।
कोरोना संक्रमण नरोकिएको भन्दै किस्ताबन्दीमा स्थानीय प्रशासनले हप्ताको शुक्रबार र शनिबार निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’ अर्थहिन देखिएको छ । दैनिकजसो दर्जनौं संक्रमित थपिरहेका छन् । बाँकेमा बुधबार मात्रै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ७३ जना संक्रमित थपिएका छन् ।
यो अवस्थालाई आँकलन गर्दै बाँकेमा किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’ अर्थहिन देखिएको भन्दै तर जनस्तरमा यो निर्णयको तीब्र आलोचना भएको छ । लामो समयदेखिको लकडाउनबाट आजित भएका सर्बसाधारणले हप्तामा दुई दिन गरिने निषेधाज्ञाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । यहाँको उद्योगी व्यापारीहरुले किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’को बिरोध गरिरहेका छन् ।
‘शुक्रबार र शनिबारमात्र कोरोना भाइरस बजारमा घुम्ने हो र ? अरु बार चाहिँ कहाँ जान्छ ? कि सबै खुल्ला छोडौं, या पूर्णरूपमा निषेधाज्ञा र लकडाउन गरौं । यो दुई दिनले कोरोना रोकिँदैन । कोरोना शुक्रवार र शनिवार आउनेजस्तो गरेर किन हप्तामा दुई दिन निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको ?’ सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणीहरु आइरहेका छन् ।
व्यवसायी विष्णु लामिछानेले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा फेसबुकमा फोटो पोष्ट गर्दै भनेका छन्, ‘माफ गर्नुहोला, बाँके जिल्लाका प्रमूख जिल्ला अधिकार ज्यू, मेरा लागि होइन, स्टाफको तलब बैंक ब्याज, सरकारको विभिनन शीर्षकका कर तिर्नका निमित्त तपाईले लागु गरेको शुक्रबार र शनिबार बन्दको दिन कोभिड १९ को स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्दै पसल खोल्ने सोंचमा छु ।’
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व महासचिवसमेत रहेका लामिछानेको उक्त पोष्टमा कमेन्ट गर्दै यहाँका धेरै उद्यागी व्यवसायीले किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’को विरोध गरिरहेका छन् । ‘हप्तामा पाँच दिन खुल्ला छोडने र दुईदिन बन्द गर्ने निर्णयले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्भव छैन,’ नेपालगन्जबासी भन्छन् ।
यता प्रशासनले संक्रमित बढेको र एकैपटक लामो समय निषेधाज्ञा गर्ने अवस्था नभएकाले हप्ता दुई दिन निषेधाज्ञा गर्नुपरेको जनाएको छ । सामाजिक दुरी कायम नभएकोले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै जारी गरिएको किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’ले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण हुने सम्भावना भने क्षीण देखिन्छ ।
यो निर्णयले कोरोनाको जोखिम घटाउन कुनै भूमिका नखेल्ने बताउँदै सर्वसाधारणले निर्णयमा पुनःविचार गर्न माग गरेका छन् । कोभिडविरुद्धको अभियानमा प्रशासनसँग सहकार्य गर्दै आएको निजी क्षेत्रसमेत असन्तुष्ट छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई कुनै जानकारी नभएको महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले निकास र जोखिम कम नगर्ने निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष आदेश अग्रवालले हप्तामा दुई दिनको निषेधाज्ञाले कुनै पनि परिणाम नदिने बताउँछन् । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँकेका महासचिव जिआर भुषालले लकडाउनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला बाँकेमा भएको किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’को कुनै पनि अर्थ नभएको बताए ।
कोरोना संक्रमण कम गर्नका लागि लकडाउन र निषेधाज्ञामात्रै विकल्प नभएको नागरिकहरुले बताउँदै आएका छन् । यसका लागि जनस्वास्थ्यका नियम र सरकारी मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक भएकोले सरकारी मापदण्ड पालना गर्न गराउन नसक्ने हो भने प्रशासनले लगाउने किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’को अर्थहिन भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाई छ ।
बाँकेमा सरोकारवाला निकायले स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना भए नभएको अनुगमन गरिरहेका बेला भएको किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’ले उनीहरुलाई निरुत्साहित बनाएको छ । तर दैनिकजसो संक्रमित बढ्दै गएकाले संक्रमणको चेन टुटाउन किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’को लगाउन बाध्य रहेको प्रशासनले बताएको छ ।
सरकारले किस्ताबन्दीमा निषेधाज्ञा गर्नुलाई आमनागरिकले सहजरूपमा लिएको देखिँदैन । लकडाउन वा निषेधाज्ञा जे गरे पनि यसको नतिजा आउनुपर्छ । नतिजाबिनाको हचुवाका भरमा गरिने निर्णयको अर्थहिन हुने भन्दै अधिकारकर्मीहरूले समेत जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई हचुवाको भरमा यस्ता कुनै पनि निर्णय नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
यो निषेधाज्ञाको कुनै अर्थ नभएको प्रष्ट देखिएको छ । किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’कै कारण सिडिओ र व्यवसायीबीच आन्तरिक जुहारी चलिरहेको छ । जनभावना विपरित सिडिओले निषेधाज्ञका निहुँमा नागरिकलाई सास्ती दिएको व्यवसायीको आरोप छ । सिडिओ अर्थात् जिल्ला सुरक्षा समितिको मनपरी निर्णयबाट आक्रोशित यहाँका व्यवसायी भित्रभित्र मुरमुरिएका छन् ।
तर, प्रशासनको अघि निरिह व्यवसायीको केही लागेको छैन । व्यवसायीहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर बजार खोल्नुपर्ने मनसायमा छन् । निषेधाज्ञा र लकडाउनदेखि आजित भएका नागरिक पनि शुक्रबार र शनिबार फेरि बन्द गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । दुईदिनको बन्दले कोरोना रोकथाम हुन सम्भावना नरहेको भन्दै स्थानीय समेत यसको विपक्षमा रहेका छन् ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी हरिलाल न्यौपानेले यसअघि नै फेसबुकको एक स्टाटसमा कर्मेन्ट गर्दै प्रजिअको मनपरीतन्त्रमा गरिएको दुई दिने निषेधाज्ञा नेपालगन्जका व्यवसायीले पालना नगर्ने चेतावनी दिएका थिए । किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’को कुनै अर्थ नभएको भन्दै व्यवसायीहरुले निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
व्यवसायीहरुले कोरोना संक्रमणबाट बच्दै स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी बजार व्यवसाय सञ्चालन गरिनुपर्ने बताइरहेका छन् । तर, बाँकेका प्रजिअ कुरूम्वाङ भने नागरिक र व्यवसायीको भावना विपरित शुक्रबार र शनिबार किस्ताबन्दीको ‘निषेधाज्ञा’ जारी गरेर सर्वसाधारण, मजदुर किसान तथा आमनागरिकलाई घरभित्रै थुन्ने दाउमा छन् ।
कोरोना संक्रमणका निहुँमा व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई दुई दिन घरमा थुनेर सास्ती दिन नहुने भन्दै अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय आफनो फेसबुकवालमा स्टाटस लेख्छन ‘निषेधाज्ञा र लकडाउनको सरकारले तत्काल विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै यहाँका जनप्रतिनिधि प्रजिअलाई निषेधाज्ञा गर्ने अधिकार दिएर आफूहरू जनताको सास्तीमा रमिते भइरहेका छन् ।